१३६ स्थानीय तहमा कुन दलको कति दाबी ? - Karobar National Economic Daily
१३६ स्थानीय तहमा कुन दलको कति दाबी ?
query_builderAugust 30, 2017 9:41 AM supervisor_accountतीर्थराज बस्नेत visibility467
काठमाडौंः स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित हुन थालेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईका ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा असोज २ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले सक्रियता बढाएका हुन् ।
भदौ ५ गते व्यवस्थापिका संसदको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक अविस्कृत गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ । यही एजेण्डा लिएर राजपा चुनावमा जाने भएको छ ।
यसअघि भएका पहिलो र दोस्रो चरणका निर्वाचनमा संविधान संशोधन विना निर्वाचनमा नजाने भन्दै राजपाले निर्वाचनमा भाग लिएको थिएन । राजपा समेत निर्वाचनमा भाग लिने भएपछि थप चुनावी रौनक बढेको बताइएको छ ।
दुई नम्बर प्रदेशमा बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेर पहिलो कसरी बन्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाएर दलहरू मधेस झरेका छन् । सबै दलका केन्द्रीय तहका नेताहरू दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीत बनेका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकँदै जाँदा दलहरूले आ–आफनै दावी समेत गरिरहेका छन् ।
यसअघि वैशाख ३१ प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको थियो । यस्तै दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का ३३४ स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको थियो । यी दुवै तहको निर्वाचनमा २७६ स्थानीय हत जित्दै एमाले पहिलो बनेको थियो ।
यस्तै २२६ स्थानीय तह जित्दै कांग्रेस दोस्रो, ८५ सिट जितेको माओवादी तेस्रो भएको थियो । यस बाहेकका अन्य साना दलले ३० स्थानीय तहमा जित हासिल गरेका थिए । दलहरूले तेस्रो चरणको चुनावमा सकेसम्म बढी तह जितेर पहिलो दल हुने दावी समेत गरिरहेका छन् ।
सय तह जितेर पहिलो पार्टी हुन्छौंः कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले यसअघिका दुई चुनावमा बेहोरेको क्षतिपूर्ति गर्दै पहिलो दल हुने दाबी गरेको छ । दुवै चरणमा गरी एमालेसँग ५० स्थानीय तहमा पछि परेको कांग्रेसले तेस्रो चरणमा भने एमालेसँगको अन्तर घटाउँदै पहिलो बन्ने रणनीति बनाएर चुनावमा जाने नेता धनराज गुरुङले बताए ।
उम्मेदवार चयनमा जुटेको कांग्रेसले केही दिनभित्रै उम्मेदवार चयन सकेर पूर्ण रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रने बताएको छ । यद्यपि अहिले पनि कांग्रेस सबै केन्द्रीय नेतालाई मधेसमा खटाएको छ र चुनावी तयारी पनि तिव्र रूपमा गरिरहेको छ । नेता गुरुङले पहिलो र दोस्रो चरण भन्दा तेस्रो चरणमा कांग्रेसको अवस्था सुदृढ हुने बताए । “यसअघिका दुई चरणका निर्वाचनमा भन्दा हाम्रो अवस्था सुदृढ हुन्छ,” गुरुङले भने, “यसअघिको क्षतिपूर्ति गरेर हामी पहिलो दल बन्छौं ।”
दुई नम्बर प्रदेशमा ८० देखि १०० स्थानीय तह कांग्रेसले जित्ने गुरुङले दावी गरे । मधेसको समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर कांग्रेस चुनावमा गएको उनको भनाइ छ । योसँगै संविधान कार्यान्वयन र स्थायित्व पनि कांग्रेसको मुख्य एजेण्डा हुनेछ ।
“मधेसको समृद्धिको एजेण्डासँगै संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको स्वागत गर्ने र च्यात्नेलाई एक ठाउँमा ल्याउने कांग्रेसले खेलेको भूमिका पनि प्रमुख एजेण्डा हुनेछ,” उनले सुनाए, “हिमाल, पहाड र तराईको एकताले नै हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र साथै समृद्धि समेत हासिल हुन्छ । हाम्रा मुख्य एजेण्डा यिनै हुन् ।”
५० सिट जितेर पहिलो कायम हुन्छौंः एमाले
नेकपा एमालेले अहिले धमाधम उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन भइसकेको एमालेले जनाएको छ ।
सचिव भीम आचार्यका अुनसार केही विवादित ठाउँबाहेकका अन्य तहका उम्मेदवार चयन भइसकेका छन् । यस्तै, एमालेले दुई नम्बर प्रदेशमा भेला, प्रशिक्षण समेत गरिरहेको छ । सँगै जनतासँग मत माग्ने काम समेत भइरहेको आचार्यले सुनाए ।
उनले तेस्रो चरणमा पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँगै हुने र तेस्रो चरणको निर्वाचन समेत एमाले पहिलो दल हुने बताए । दुई चरणमा २७६ तह जितेको एमालेले दोस्रो चरणमा ५० सिट जितेर पहिलो हुने उनले दाबी गरे । “हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँगै हो । यदि निष्पक्ष चुनाव भयो भने हामी ५० सिट जितेर पहिलो दलकै रूपमा स्थापित हुन्छौं,” आचार्यले भने । उनले विकास र समृद्धिको एजेण्डा लिएर एमाले चुनावमा जाने सुनाए ।
“तराई मधेसको विकास र समृद्धि मुख्य एजेण्डा हो,” उनले भने, “हाम्रो नेतृत्वको सरकारले तराई मधेसका विकासका लागि ल्याएका नीति र कार्यक्रम पनि हाम्रा एजेण्डा हुन् ।”
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण, डुबान समस्याको स्थायी हल खोज्ने लगायतका एजेण्डा समेत एमालेले अघि सार्ने उनको भनाइ छ ।
५० स्थानीय तह जित्छौं :माओवादी
नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई नम्बर प्रदेशमा ५० स्थानीय तह जित्ने बताएको छ । दुई चरणका निर्वाचनमा ८५ स्थानीय तह जितेको माओवादीले तेस्रो चरणमा ४० देखि ५० तह जित्ने लक्ष्य लिएको नेता मणि थापाले बताए । अहिले उम्मेदवार चयनको काम चलिरहेको र केही दिनभित्रै सबै उम्मेदवार चयन भइसक्ने उनको भनाइ छ ।
योसँगै माओवादीले मधेसवादी दलसँगको तालमेलका लागि छलफल समेत चलाइरहेको छ । “मधेसवादी दलसँग तालमेल गर्ने तयारी, चुनावमा लैजाने एजेण्डाका बारेमा पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ,” नेता थापाले भने, “मधेसमै हेडक्वाटर बनाएर अन्य पार्टी नेता कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउने लगायतका काम समेत भइरहेका छन् ।”
संविधान संशोधनमा माओवादीले खेलेको भूमिका, तराईको विकास र समृद्धि, आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा मधेसको विकास समृद्धिका क्षेत्रमा गरेका काम, कृषक पेन्सन लगायतका एजेण्डा लिएर चुनावमा जाने उनले सुनाए ।
यता, केही दिनयता २ नम्बर प्रदेशका जिल्ला दौडाहामा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुई नम्बर प्रदेशमा आफ्नो दल पहिलो हुने दाबी गरेका छन् । यसअघिका दुई चरणमा आफ्नो दल तेस्रो भए पनि तेस्रो चरणमा भने पहिलो दल हुने उनले दाबी गरेका हुन् ।
राजपाको पनि पहिलो हुने दाबी
पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले तेस्रो चरणको निर्वाचनमा भने भाग लिने भएको छ । घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको राजपाले दुई नम्बर प्रदेशमा पहिलो हुने दाबी गरेको छ । “प्रतिस्पर्धा सबैसँग हुन्छ । तर, मधेसमा हामी पहिलो दल हुन्छौ,” राजपा नेता मनिष सुमनले भने ।
उनका अनुसार राजपाले अहिले उम्मेदवार छनोट गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र उम्मेदवार चयन समेत सकेर चुनावी प्रचारको काममा तिव्रता दिने राजपाको तयारी छ । संविधान संशोधन, सम्बोधन नभएको मधेसका मुद्दालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर चुनावमा जाने सुमनले बताए । यस्तै मधेसको समृद्धिको एजेण्डा समेत राजपाको प्रमुख एजेण्डा हुने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ निर्वाचन कार्यक्रम
निर्वाचन आयोगले भदौ २१ मनोनयन दर्ता गर्ने मिति तोकेको छ । आयोगका अनुसार २१ गते नै उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिने छ । यस्तै २२ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र मनोनयपत्र जाँच हुनेछ ।
२३ गते मनोनयन भएका उम्मेदवारहरूको नामवली प्रकाशन र नाम फिर्ता लिने मिति तोकिएको छ । २४ गते अन्तिम नामवली प्रकाशन गर्ने, २४ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने र असोज २ गते निर्वाचन हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद दुई नम्बर प्रदेश